राती बसमा सुतिरहेको बेला उस्ले मेरो तिघ्रामा हात चलाईरहेको रहेछ | langtangnews.com
Posted By: Hemnath Khatiwada December 13, 2017
वेबसाईटमा पोस्ट हुने सम्पूर्ण कथा तथा बिषयवस्तु कल्पनिक हुन् , कुनै पेसा , मान्छे , धर्म , समन्धलाई असर पुराउन लेखिएको होइन । अनी कुनै ठाउँ , वर्ग , जाती लाई हानी पुराउन खोजिएको पनि हैन । कसैको जिन्दगीमा मेल खान गए मात्र सम्योग हुनेछ । यदी कसैलाई चोट पर्न गएमा माफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ। अनी यो वेबसाईट मा भएका सम्पूर्ण कथा हरु १८ बर्ष भन्दा माथिका दर्सक हरुको लागि मात्र हो । त्यो भन्दा कम उमेर हुने हरुले कृपया नहेरिदिनु होला । साथै अरु धेरै कथा पढ्न हाम्रो वेबसाईट आफ्नो कम्प्युटर बाट हेर्न सक्नु हुनेछ र मोबाईल बाट Slide गरेर अर्को कथा पढ्न सकिने छ । । कथा दिदा पात्रको नाम परिवर्तन गरेर दिनुहोला ।
साथै योन कथा लेखेर घर बसी बसी महिना को ३० हजार कमाउन चाहनु हुन्छ भनी हामीलाई संपर्क गर्नुहोस् । तपाईंले मेरो फकेबूक पेज Surakshya Poudel या हाम्रो ईमेल enepali.info@gmail.com मा पनि संपर्क गर्न सक्नु हुन्छ । कथाका बिषयवस्तु हरु कल्पनिक हुनुपर्ने छ साथै कथा नेपाली फन्ट मा हुनु पर्नेछ । कम्तिमा पनि ५०० शब्द अनिवार्य हुनु पर्नेछ । कुनै पनि वर्ग, धर्म तथा जातीलाई कथाको बिषयवस्तुले असर गर्नु हुँदैन । दिन मा कम्तिमा ५ वटा कथा लेख्नु पर्नेछ । जती धेरै कथा लेख्न सकियो त्यती धेरै तलबको बेवस्ता गरिएको छ । दिन को एउटा कथा पनि पठाउन सकिन्छ । एउटा कथालाई कम्तीमा १०० रुपैयाँ दिइने छ । कथा कुनै पनि वेबसाईट बाट कपि गरेको हुनु हुँदैन । कपि गरिएको कथा बाट हामीलाई कुनै पनि आम्दानी हुँदैन । त्यसैले कथा लेख्दा आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्नुहोला । जस्ले काम गर्न चाहनु हुन्छ कृपया एउटा आफ्नो कथा शाहीत फोन नम्बर मेल गर्नुहोला । हामीले कथाको बिषय वस्तु हेरेर तपाईंलाई संपर्क गर्ने छौ ।
कुरा आज भन्दा १२ बर्ष अघिको हो । दसैंको टिका लगाईहोरी काठमाडौं फर्कने क्रममा म फर्पिङ बस पार्कमा बस कुरिराखेको थिए । साझ साँढे पाँच भईसकेको थियो । बस पार्कमा बस एउटा पनि थिएन । बस कुर्ने मान्छेहरु टन्नै थिए । पर्खदा पर्खदा बल्ल एउटा बस आयो। मान्छेहरु कोही झ्याल कोही ढोकाबाट बसमा प्रबेश गरे । म चाँही ढोकाबाट चढन सफल भए। बसको भिड छिचोल्दै बिचमा पुगे । बसभित्र साझ भएकोले अन्धकार छिप्पिदै गईराखेको थियो। मानिसको अनुहार बल्लतल्ल देखिन्थियो त्यो भिड्मा ।
खलाशिले मान्छेहरुलाई ठेल्दै थियो ढोकाबाट , यत्तिकैमा मेरो शरीर म भन्दा अगाडिको मान्छेको शरीरसँग टास्सिन पुग्यो । उसको उचाई मेरो लगभगको थियो पछाडिबाट हेर्दा छोटो केटाको जस्तो कपाल काटेको, जिउ चाँही पातलो तर उस्को नितम्ब चाँही केही ठुलै थियो जस्को कारन मेरो शरीरमा छुदा मलाई थाहा भयोकी उनी नारी हुन भनेर किनकी मेरो शरीरमा स्पर्स भएको त्यो मासुका डल्लाहरु हल्का ठुलो र पछाडि उठेको थियो । जुन घस्रन भएको थाहा हुँदा अनायासै मेरो शरीरमा एक प्रकारको ताप उत्पन्न हुन पुग्यो र आफ्नै संसारमा सुतेर सपना देखिरहेको मेरो सानो भाई बिउझिन पुग्यो ।
बस आफ्नै गतिमा गूड्दै थियो । उन्को र मेरो हात बसको माथिको डन्डिमा समातिराखेका थियौ । त्यो भिडमा एकअर्का को हात टास्सिराखेका थिए मलाई भने हातले मात्र नपुगेर शरीरनै झन टस्सौउन मन लाग्यो तर कसरी उनिसित टास्सिने ?? फेरी उुन्ले पछाडि फर्केर एक झापड हनिन भने ?? भयो म त यस्तो गर्दिन , आटै आएन / के गरु के गरु भयो । मनमा अनेक कुराहरु खेल्न थाले । कसरी उन्को जिउमा छुने होला ? यत्तिकैमा बसले जोड्ले ब्रेक लगायो शायद अगाडि केहीले बाटो काट्यो होला ? उनी एक्कासी मतिर हुत्तिईन। उन्लाई मैले एक हात्ले च्याप्प समाते र लड्नबाट बचाए । उनले मतर्फ हेरेर सरी भनिन अन्ध्यारो भएको कारण अनुहार राम्ररी देखिएन । उन्का आँखा र दात्को सेतो भाग मात्र देख्हिराखेको थियो तेस्बेला । तर सरी त मैले पो माग्नु पर्ने किनकी उन्लाई सम्हाल्दा मेरो हात उनको बक्षस्थलमा पुगेको थियो । उनी हासिरहिन र आफ्नो ठाउमा फेरी जस्ता को तेस्तई उबीईन । उन्को त्यो कोमल बक्षस्थल समत्दा साह्रै आनन्द महसुस भयो । अब शरीरले केही खोजे जस्तो लाग्यो ।
मेरो हातले उनको हातमा हल्का स्पर्स गरे अलिक नगिच बढाए । उनको कुनै नराम्रो प्रतिकृया आएन। मलाई झन हौसला पुग्यो अगाडि बढनको लागि , हात माथि हात बढाएर अन्तिममा समाएरै छोडे । यती गर्दा पनि कुनै प्रतीकृया नआएपछी शरीरनै अगाडि बढाए मेरो शरीरले उनको शरीरमा मज्जाले टासियो । मेरो एक एक भाग ले उनको एक एक भागको चेकजाच गर्‍यो । मेरो सानोभाइले उनको नितम्ब स्पर्स गर्दा उसलाई खपिनसक्नु भएछ । तसर्थ मेरो तिघ्रा उनको तिघ्रामा टास्सीइ घस्रन थाल्यो । यसो गर्दा उनलाई आनन्द आएछ क्यारे उनले आफ्नो नितम्ब मेरो सानो भाई तर्फ बढाइन अब मेरो सानेलाई पनि के चाहियो र ? उ पनि बिस्तारै उठन थाल्यो र ठाडो भएर दुई पहाड बिचको खोल्छामा मज्जाले टासिएर दलिन थाल्यो । उनलाई पनि साह्रैनै मज्जा आएछ कुनै प्रतिरोध्नै गरिनन। यत्तिकैमा बसको बत्ती बल्यो । अब पर्‍यो फसाद कसरी सम्हाल्ने सानेलाई ,
उस्लाई सम्हल्नै गार्हो भयो । अघी जस्तै हल्लिउ भने छेउ छौकाले थाहा पौलन भन्ने पिर नहल्लेउ भने सानेलाई खपी नसक्नु भएको छ । के गर्ने के गर्ने ? अब केही उपाये नपाएपछी म उनको शरीरमा चिपिक्क टास्से र सानेलाई चाँही उनको गल्छिमा बिस्राम गराईदिए । सानेले बान्ता गर्न लागिसकेको थियो । घाटी सम्म आएरपनी बाहिर फ्याक्न सकिराखेको थिएन । यसै क्रममा मेरो घुडा उनको दुई तिघ्राबिच छिराए र उनको दुबै तिघ्राको स्पर्स गरे , स्वर्गनै पुगेको अनुभुती भयो । उनले पातलो कुर्ता सलवार लगाएकोले उनको तिघ्रा सार्है कोमल रुपमा स्पर्स भैराखेको थियो। उनले सेतो रङको कुर्ता लगाएको रहिछिन पछाडिको ढाड खुल्लई देखिन्थियो । यत्तिकैमा उनी म तर्फ फर्किईन । उनी यत्ती सुन्दर थिईन कि भनेर साध्य छैन । ठुला ठुला गाजल लगाएको आँखा ,गुलाबी ओठ ,पोटिल गाला झन त्स्मा दशैको टिका त सुनमा सुगन्धनै थियो । हेर्दै ओठमा च्वाप्प च्वाप किस खाउ जस्तो ।
उनको बक्षस्थल र मेरो छाती एकापस्मा चुम्बन गर्दै थिए । शायद उनिलाई आनन्द आएको कारणले होला । उनी झन झन छाती टास्दै थिईन । एत्त्तिकैमा बसको बत्ती पनि निव्यो जुन म र शायद उनिपनी प्रतिक्षा गरिराखेका थियौ । उनी मेरी अगाडि भएको कारण मेरो सानो भाई उसको गुफामा चिहाउदै थियो । बत्ती निभेकोले मेरो आट बडेको थियो। मैले उनको नितम्ब एक हातले च्याप्प समातेर म तर्फ टसाए र जोडले उनको गुफामा सानेलाई टसाएर हल्का तलमाथी हल्लाउन थाले । उनलाई सार्है खपिनसक्नु आनन्द भएछ क्यारे आँखा चिम्लेर एक्दम लामो सास फेरिन । उनको ओठ मेरो ओठ नजिकै थियो । मलाई पनि खपिनसक्नु भयो र मैले त्यो नजिकै रहेको लाल कुन्डमा चुम्बन गरिहाले ।
हाम्रो चुम्बन लग्भग १ मिनेट जती चल्यो तर उनले एकैचोटी मेरो हात उनको नितम्बबाट निकालिन र अगाडि लिएर आईन अनी मेरो ओठ्बाट उनको ओठ पनि छुटाईन । मेरो ओठ्मा अन्तिम एक चुम्बन दिएर उनी पछाडि पहिलेकै पोजिसनमा फर्किन। मलाई भने खपिनसक्नु भएको थियो । सानेलाई उनको नितम्बको खोल्छामा टसाएर मेरा हातले उनको नितम्ब सुम्सुमाएर आनन्द लिन थाले हातले उनको नितम्ब स्पर्स गर्दा गर्दै मेरो औंलात उनको प्वाल तिर पो पुगेछ ।मैले त तेतिबेला मात्र थाहा पाए जब मेरो औंला उनको हातले समात्यो । उनलाई असजिलो भएर नै होला उनले त्यो गर्न दिईनन। हेर्दा हेर्दै बस त शाहीदगेट आईपुगिसकेछ। बसको बत्ती पनि बल्यो तब उनले मेरो औंला छोडिदिईन ।
यात्रा कत्ती छिटो सकिएछ थाहानै भएन । बस रोकियो सबैजना झर्न थाले म पनि हतार हतार बसबाट झरेर सौचालयतर्फ लागे । सानेलाई बान्ता आउन लागेर उकुस्मुकुस भईराखेको थियो । उसलाई सौचालयमा गर्दनमा थप्थपाएर बान्ता गराए । साह्रै स्वर्गिय आनन्द महसुश भयो कुनै खेलनै जितेको जस्तो । त्यसपछी उनलाई सम्झिए र हतार हतार खोज्न हिंडे बस तर्फ तर अफसोच उनी त्यहाबाट हिडिसकेकी रहिछिन यताउती हेरे खोजे तर उनी फेला परिनन ।